गृहपृष्ठ राशिफल आजको राशिफल
आचार्य युवाज्यो. गोविन्द पाण्डेय
माताआलमदेवी ज्योतिष तथा वास्तु परामर्श केन्द्र ।
बि.सं.२०७७ माघ १७ गते शनिबार
तदनुसार ई.स. २०२१ जनवरी ३० तारिख
प्रमादी सम्बत्सर , शिशिर ऋतुसूर्य उत्तरायण ,सूर्य मकर राशिमा ।
माघ कृष्णपक्ष द्वितीया तिथि रा.१२ः५१ बजे सम्म , मघा नक्षत्र भोलि बि.३ः५० बजे सम्म आयुष्मान योग ,बालव करण , कर्कट राशिमा सूर्योदय बि.६ः५५, अस्त ५ः४५ साझ
स्वास्थ्यमा सामान्य फेरबदल हुन सक्नेछ । आफन्तको सहयोग राम्रो प्राप्त होला तर साथीभाईको सहयोग पनि मिल्नेछ । आर्थिक कारोबारमा निकै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ किनकी व्यापार व्यवसायमा हानी बेहोर्नु पर्नेछ ।
रमाइलो यात्रा हुने देखिन्छ । यात्रा केही खर्चिलो पनि हुन सक्नेछ । पुराना कामहरु सफल हुनेछन् । मुद्दा मामिलामा आफ्नो जित हुने देखिन्छ । पैत्रिक सम्पत्तिमा आफ्नो हक यथावत् नै रहला ।
यो पनि पढ्नुहोस.. आजको राशिफल
चिसोका कारण स्वास्थ्यमा केही फेरबदल आउला । व्यापार व्यवसाय गर्ने, व्यक्तिहरुका लागि यो समय निकै राम्रो छ । आफूभन्दा ठूलाहरुबाट मानसम्मान प्राप्त हुनेछ र नयाँ जिम्मेवारी पनि प्राप्त हुनेछ आर्थिक लाभका मार्गहरू प्रशस्त भेटिनेछन् ।
आँटेका कामहरुमा सफलता मिल्ने देखिन्छ । राज्यको तर्फबाट मानसम्मान प्राप्त होला र फैसला पनि तपाईकै पक्षमा हुने देखिन्छ पुराना साथीभाईहरु सँगको जमघटले मनमा खुशी छाउने छ ।
प्रेम प्रगाढ हुनेछ । आफूले सोचेको भन्दा फरक काममा सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ । आर्थिक लाभका लागि अथवा आर्थिक जोहो गर्नका लागि स्थान परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । आफू बसिरहेको खाइरहेको लिई रहेको सुविधाबाट बञ्चित हुन पनि सकिनेछ तर फाइदा भने आफ्नै पक्षमा हुनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस.. आजको राशीफल
शरीरमा आलस्यता बढ्नेछ । कार्यमा ढिलासुस्ती होला ।
आफूले आँटेका काम गर्नकालागि अर्थात काममा सफल हुनाकालागि केही संघर्ष गर्नुपर्नेछ । पछाडी आफ्ना कुरा काट्नेहरु समाजमा प्रशस्त भेटिनेछन् ।
नयाँ कार्यको खोजी गरेका व्यक्तिहरूका लागि सफलता मिल्ने समय रहेको छ, व्यापार व्यवसायमा पनि भनेजस्तो लाभ नहोला । स्वास्थ्यमा सामान्य सुधार नै देखिन्छ आफन्तहरूको भरपुर सहयोग मिल्नेछ ।
सहासिक कार्यमा मन जानेछ, कार्यमा सफलता होला । प्रतिस्पर्धामा विजय प्राप्त गर्नलाई केही संघर्ष गर्नुपर्ने समय देखिन्छ। ससुराले को सहयोग भरपूर रहने देखिन्छ दीर्घकालीन कार्यको सुरुवात हुनेछ ।
धनु राशिः समाजमा प्रतिष्ठा बढ्नेछ दीनदुःखीको सहयोग गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ, धार्मिक कार्यमा मन जानेछ कार्यमा सफलता अवश्य मिल्ने देखिन्छ
कृषि तथा पशु चौपायाको व्यापार व्यवसायबाट निकै राम्रो आम्दानी हुने दिन रहेको छ । नयाँ कार्य तथा दीर्घकालीन कार्यको शुरुवात हुनेछ । विद्यार्थी वर्गका लागि पढाईमा प्रगति गर्ने समय रहेको छ सन्तानबाट सुख प्राप्त होला ।
स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । आफन्तहरुबाट टाढा हुनुपर्ला । पुराना साथीभाइहरूसँगको जमघट हुने अवसर मिल्नेछ, मिष्ठान्न पानको समय पनि रहेको छ । स्वस्थ्यमा सुधार देखिएला । आफ्नो कमी कमजोरी सुधार्ने दिनको रुपमा आज हुनेछ ।
वादविवाद वा झैझगडामा फस्न सकिएला तथापि जीत तपाईंकै हुनेछ । कार्यबाट मानसम्मान प्राप्त हुनेछ । समाजमा तपाईंको गुणगान गाउने व्यक्तिहरूको कमी हुनेछैन दीनदुःखी माथि सहयोग गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । धार्मिक कार्यमा मन जाने देखिन्छ ।